CABINS UMHLABA WELANGA
I-complex yethu ethi "TIERRA DE SOL" ineekhabhathi ezi-3 ezikhethekileyo zokuhlala ukusuka kwi-2 ukuya kwi-7 abantu, ibekwe kwi-Historic Manzano ngaphakathi kwe-Uco Valley entliziyweni ye-Mendoza, indawo yobuchule bokufikelela kuzo zonke iindawo zokutyelela kwiphondo lethu.
"Iparadesi efihliweyo phantsi kwesibhakabhaka esivulekileyo".
Ukuzola yimeko yokuzola, ukuzola okanye uxolo athi umntu othile abe nalo, yile nto sikunika yona.
Ikhabhinethi nganye inendawo yayo eluhlaza emnandi apho unokuqwalasela ubuhle kuwo onke amaxesha onyaka, kunye neAndes Front Range njengenqanaba eliphambili. Ehlotyeni, ilanga likumema ukuba uphole kumachibi amanzi asentwasahlobo okanye udlale njengabantwana kwi-Pircas Stream ehamba nge-complex. Ekwindla unokubona i-palette yemibala ecacileyo phakathi kwemithi ejikelezileyo, "kulabo abaye bahlala eMendoza, ikwindla zizinto eziqulunqwe ngothando." Kwaye ke ubusika bufika nengubo yayo emhlophe esikhuthaza ukuba sonwabele ukugqabhuka komlilo kwindawo eshushu. Ekugqibeleni, intwasahlobo isirhangqe ngokuntyiloza kweentaka nevumba elimnandi leentyatyambo zasendle.
I-Complex ikwiCamino del Vino kweyona ndawo yokulima eyona ndawo ibalaseleyo yeMalbec emhlabeni, inokufikelela ngokulula kwiindawo ezinkulu zewayini kunye nezo zigada iimfihlo zewayini yobugcisa. "Ukuba ufike eMendoza kwaye awusela wayini, kutheni uze?"
INtaba ayifanelanga ukunconywa kuphela kodwa iya kufunyanwa, iManzano Histórico ineendlela zokuhamba ezinamanqanaba ahlukeneyo obunzima bokufota iindawo ezizodwa ezinezityalo kunye nezilwanyana zendalo. Kukho iindlela eziqhelekileyo ezifana Chorro de la chicas kunye Paso de los Puntanos, abanye ezifana kumathambeka Tapón de Arenales kunye Iindonga zayo Yellow ye iliwa zokugwencela yobungcali, kwamaxandeka ezo ntaba iphakamileyo ebusika kuba ski ukuba okukhona nomdla. Ngaphantsi kokujongwa kwee-condors unokuxabisa amava awodwa.
I-Manzano Histórico yayiyinxalenye kunye nendawo esisiseko kwimbali yokuzimela geqe kwaMazantsi eMelika, isenza inxalenye yeSekethe yaseSanmartiniano, inemyuziyam yembali kunye nesikhumbuzo "Buyela kwiLizwe likayise" ephakanyiswe ngokuhlonipha uGeneral José de San Martin, ambalwa ehlabathini apho uMkhululi inokubonwa wambu neempahla zokunxiba.
Ezi zezinye zezithako ezenza le ndawo ibe yodwa.
Indawo esihlala kuyo yiValle Sol y Nieve eManzano Histórico eTunuyan.IMendoza yindawo ezolileyo ewela umjelo wePircas kunye nemithi enamagqabi atsala inani elikhulu leentaka.
SiseManzano Histórico Provincial Reserve yePiuquenes apho sizama ukulondoloza ubuhle obuzuzwe njengelifa kwizizukulwana ezizayo.
Sikunye noCarlos kunye nabasebenzisana nathi uNancy, uMiriam kunye noTito siya kuba sinakho kuyo nayiphi na imibuzo, iingxaki okanye uncedo olufunayo ukwenza ukuhlala kwakho kungakholeleki!
"Samkela iindwendwe kwaye sivalelise kwizihlobo"